[Topnews:-] Jeneral Gabre oo xoog looga saaray shirkii hogaanka Ciidanka xooga Somalia? - Galmada.net
Hogaanka Ciidanka Soomaaliyeed iyo Saraakiisha sare ee Ciidanka Melleteriga oo shir xasaasiya uga socday Muqdisho ayuu Jeneral Gabre u galay hasse yeeshee waxaa durbadiiba ka hor yimid Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneral Maxamed Adan oo weeydiiyay wuxuu ka soo doonay taliska Melleterigga Somalia ?
Jeneral Gabre ayaa ugu jawaabay waxaan u socday inaan shirkaan idinkala qeybgalo ?
Taliyaha Ciidanka xooga dalka ayaa ugu jawaabay malaha waad soo qaldantay halkaan maaha Wasaaradda Arrimaha dibadda Somalia !!
Jeneral Gabre ayaa weeydiistay Jeneral Maxamed Adan inuu si gaara ula hadlo laakiin waxaa loogu jawaabay Gabre “Waajibaad Qaran ayaan gudanayaa kuumana haayo jaanis”
Jeneral Gabre ayaa telefoon ku wacay Madaxweyne Garguurte kadibna wuxuu mar labaad ku dhahay taliyaha fadlan la hadal telefoonkaan laakiin Jeneral Maxamed Adan ayaa ugu jawaabay ” Waqti uma haayo telefoon,waxaan gudanayaa waajibaad Qaran sidaas darteed degdeg uga bax hoolka shirka maadama aad tahay diblomaasi shisheeye”
Warbixintaan oo ay Waagacusub la wadaageen Saraakiishii ka qeybgaleeysay shirka waxeey sheegeen inuu si degdega uga baxay hoolka Jeneral Gabre oo careeysan laakiin saacad kadib waxaa taliyaha soo wacay Madaxweyne Xasan Sheekh oo weeydiistay inuu si degdega ugu tago.
Jeneral Maxamed Adan ayaa u tegay Garguurte lama ogga wixii dhexmaray laakiin Taliyaha ayaa isla markiiba wuxuu bedelay ilaaladda Taliska Ciidanka iyo kuwiisa gaarka ah .
Sikastaba ha ahaatee, Jeneral Gabre ayaa noqday nin bahdila Madaxda sare ee Dowladda Somalia iyadoo aysan jirin awood uu leeyahay.